Okpomoku nke uwa na emebi mmiri Caspian | Netwọk Mgbasa Ozi
Okpomoku nke uwa n’ikpo osimiri Caspian
Okpomoku nke uwa n’ile n’ebute oke egwu di na gburugburu uwa dika nke anyi ga-ekwu maka ya. Oké Osimiri Caspian bụ nnukwu mmiri mmiri dị n'ime obodo site na onye ọ bụla n'ụwa. Agbanyeghị, n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọ na-eji nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ n'ime afọ iri abụọ gara aga.
Mmụba nke okpomọkụ jikọtara na mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa na-eme ka Oké Osimiri Caspian tufuo nnukwu mmiri. Mme utịp ewe ke emi ekeme ndinyene?
1 Ọmụmụ ihe na Oké Osimiri Caspian
2 Ihe si na okpomoku uwa bia
Ọmụmụ ihe na Oké Osimiri Caspian
Mmiri mmiri na Oké Osimiri Caspian gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7 centimeters kwa afọ site na 1996 ruo 2015, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 1,5 n'ogologo, dị ka nsonaazụ nke nchọpụta ọhụrụ ahụ. Oke Osimiri Caspian dị ugbu a bụ naanị 1 mita karịa ọkwa kachasị dị ala ruru na njedebe 1970s.
Mmiri mmiri a sitere na Oké Osimiri Caspian ejikọtara ya na oke ikuku ikuku dị elu karịa oke osimiri ahụ. Ihe omumu ihe omumu ahu gosiputara na okpomoku nke Osimiri Caspian riri elu site na otu ogo n’agbata oge abuo echebara n’agbata afo 1979-1995 na 1996-2015.
Ihe si na okpomoku uwa bia
Nsonaazụ nke mmụba nke okpomọkụ sitere na okpomoku ụwa na-ebute ọnwụ nke nnukwu ọdọ mmiri nnu a na ọdịda nke ụdị ndị bi na ya ga-ata ahụhụ ka okpomoku ụwa na-abawanye.
Osimiri Caspian gbara mba ise gburugburu ma nwee ọtụtụ akụ na ụba na anụ ọhịa dị iche iche. Ọ bụkwa ebe dị mkpa ịkụ azụ maka mba ndị gbara ya gburugburu. Ya mere ọdịda ya ọ ga-enwe mmetụta n'ọdịnihu.
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ka okpomoku zuru ụwa ọnụ si nwee ike ikpochapụ osimiri ndị dịgidere kemgbe ọtụtụ nde afọ na n'ime narị afọ ole na ole na-apụ n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Okpomoku nke uwa n’ikpo osimiri Caspian
Hurricane Irma, nke kachasị ike na akụkọ ihe mere eme na Atlantic, na-ebibi nnukwu mbibi
Kedu ihe dị iche na etiti ifufe na ebili mmiri